Sokafy ny sisintany US miaraka amin'ny fitsapana fahatongavan'i COVID: World Network Network & US Travel
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Sokafy ny sisintany US miaraka amin'ny fitsapana fahatongavan'i COVID: World Network Network & US Travel
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny vondrona indostria dia manentana ny fanonganana ny famerana ny dia iraisam-pirenena mankany Etazonia
Tsy misy fitsangatsanganana any Etazonia amin'izao fotoana izao. Ity ny valin'ny White House tamin'ireo mpitsidika eropeana izay nanantena ny handeha hanao vakansy VISIT USA.
Etazonia dia tsy hanafoana ny fameperana efa misy "amin'izao fotoana izao" noho ny ahiahy noho ny fiovaovan'ny Delta COVID-19 sy ny fiakaran'ny isan'ny trangana virus coronavirus any Etazonia, hoy ny fanamafisan'ny White House ny Alatsinainy teo.
Ny World Tourism Network sy ny US Travel dia miangavy ny hanokafana an'i Etazonia ho an'ireo mpitsidika vahiny, saingy ny WTN dia te hanampy fiarovana hafa - fahatongavan'i COVID ho an'ireo mpandeha vita vaksiny feno ihany koa.
Ny Delta variant dia miteraka fitomboan'ny aretina COVID-19 na dia eo aza ny vaksiny amin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika.
Herinandro lasa izay Ny US Travel dia nanery ny fanafoanana ny fameperana ny dia ho an'ny mpitsangatsangana eropeana.
Androany nanome valiny ny White House, ny US Travel dia tsy te hihaino: "Raha misy ny toerana misy antsika ankehitriny… miaraka amin'ny Delta variant, dia hitazomana ny fameperana efa misy izahay amin'izao fotoana izao," hoy ny mpitondra tenin'ny White House Jen Psaki ny Alatsinainy teo, nanonona ny fanaparitahana ny karazana Delta any Etazonia sy any ivelany. "Notarihan'ny Delta variant, misy tranga miakatra eto an-trano, indrindra amin'ireo izay tsy voamarina maso ary toa mitombo hatrany amin'ny herinandro ho avy."
Ny filoha lefitry ny raharaham-bahiny amerikanina dia ny filoha lefitry ny raharaham-bahiny ary ny politika Tori Emerson Barnes dia namoaka ity fanambarana manaraka ity momba ny fanapaha-kevitry ny fitondrana Biden hitazona ny fameperana ny dia.
“Mampanahy ny variant covid, saingy ny sisin-tany mihidy tsy misakana ny Delta variant hiditra ao Etazonia raha toa ka maharitra maharitra amin'ny fivoaran'ny virus ny vaksiny. Izany no antony mahatonga ny orinasam-pizahan-tany any Amerika ho mpanohana ny rehetra amin'ny fanaovana vaksiny — io no lalana azo antoka sy haingana indrindra ho an'ny rehetra.
"Raha toa ny firenena hafa, toa an'i Canada, UK, ary ny ankamaroan'ny UE, dia samy nandray fepetra handray ireo mpitsidika miditra amin'ity fahavaratra ity ary hanangana indray ny asa sy ny toekarena eo an-toerana, Etazonia kosa dia mikatona amin'ny iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny toekarena fitsangantsanganana. - ilay mpandeha anatiny.
“Raha ny taha avo indrindra amin'ny vaksiny amin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika dia azo atao ny manomboka mandray tsara ireo mpitsidika vita vaksiny avy amin'ireo tsena miditra lehibe ireo.
Dr. Peter Tarlow, manam-pahaizana momba ny dia sy fiarovana iraisam-pirenena an'ny safertourism.com
Dr. Peter Tarlow, co-chairman an'ny Ny World Network Network Hoy izy: “Miombon-kevitra amin'ny US Travel izahay amin'ny fitadiavana fomba azo antoka hanokafana ny sisintaninay ho an'ny mpitsidika. Manentana ny fitondrana Biden izahay mba tsy hitaky fanadinana na porofo vaksinina fotsiny rehefa mandeha sidina mankany Etazonia fa fitsapana hafa indray rehefa tonga ary alohan'ny hamelana azy hivoaka ny faritry ny seranam-piaramanidina any amin'ny seranam-piaramanidina amerikana, na seranan-tsambo fidirana. Ny valin'ny fitsapana haingana dia matetika misy ao anatin'ny 15 minitra, ary i Etazonia dia afaka mianatra avy amin'ny firenena hafa, toa an'i Israel ohatra. Tsapanay fa zava-dehibe ihany koa izany ho an'ireo mpandeha vaksiny sy tsy vita vaksiny. ”
Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network (WTN) miorina any Hawaii dia nanampy hoe: "Hawaii dia ohatra tsara amin'ny toeran-tany fizahan-tany misy aretina vaovao na dia eo aza ny tahan'ny vaksiny COVID-19. Misokatra ho an'ireo mpandeha an-trano ihany i Hawaii ary manoritra ny tena sary momba izay tokony hotadiavina rehefa manitatra ny fanokafana ny firenena amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena indray. I Hawaii dia mitaky fitsapana PCR ho an'ireo mpandeha tsy vita volo, fa tsy misy fanandramana fanampiny ho an'ireo mpitsidika tonga na vaksiny. Tsara ny fitsapana PCT, saingy ny fitsapana haingana rehefa tonga ny olon-drehetra dia hanome toky hafa ny sary. ”
Dr. Peter Tarlow koa dia manam-pahaizana momba ny fiarovana sy fiarovana any Etazonia ary efa niasa tamina tetikasa maro nataon'ny Departemantam-panjakana amerikana taloha.
US Travel dia nanipika tamin'ny fanambarana nataony.
"Miangavy am-panajana ny fitondrana Biden izahay mba hamerina hijery ny fanapaha-keviny ao anatin'ny fotoana fohy ary hanomboka hanokatra ny dia iraisam-pirenena ho an'ny olona vita vaksiny, manomboka amin'ny lalantsara an'habakabaka eo anelanelan'i Etazonia sy ireo firenena izay manana tahan'ny fanaovana vaksiny mitovy amin'izany."
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiray antoka aminao sy amin'ireo fizahan-tany sy mpitondra fanjakana, ny Tambajotra fizahan-tany manerantany nipoitra avy tao amin'ny Fifanakalozan-kevitra momba ny dia indray. WTN dia mikasa ny hamorona fomba fanavaozana ho an'ny fitomboan'ny sehatry ny fizahan-tany maharitra sy maharitra ary hanampy ny orinasa kely sy salantsalany amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany mandritra ny fotoan-tsarotra sy sarotra.